တောင်ကိုရီးယားက သစ်သီးဝလံတွေ မြန်မာ့ဈေးကွက်မှာ ရောင်းချမယ် | MCN (MYANMAR CHANNEL NEWS)
Home သတင်း ပြည်တွင်းသတင်း တောင်ကိုရီးယားက သစ်သီးဝလံတွေ မြန်မာ့ဈေးကွက်မှာ ရောင်းချမယ်
°¡À» »ç°ú ¸ÀÀÖ¾î¿ä! (¼­¿ï=¿¬ÇÕ´º½º) Á¤ÇÏÁ¾ ±âÀÚ = 1ÀÏ ¿ÀÀü ¼­¿ï ÀÌ¸¶Æ® ¿ë»êÁ¡¿¡¼­ ¸ðµ¨µéÀÌ °¡À» ÇÞ ºÎ»ç »ç°ú¸¦ ¼±º¸ÀÌ°í ÀÖ´Ù. ¾ÖÇÃ µ¥ÀÌÀÎ 4ÀÏ ´Ü ÇÏ·ç µ¿¾ÈÀº 45% ÇÒÀÎÇÏ¿© 12¡­14°³¿¡ 9,960¡­9,940¿ø¿¡ ÆÇ¸ÅÇÑ´Ù. 2017.11.1 chc@yna.co.kr/2017-11-01 11:57:15/
တောင်ကိုရီးယားက သစ်သီးဝလံတွေ မြန်မာ့ဈေးကွက်မှာ ရောင်းချမယ်
တောင်ကိုရီးယားက လတ်ဆတ်တဲ့ သစ်သီးဝလံ ၃၇ တန်ကို အလားအလာရှိတဲ့ မြန်မာ့ဈေးကွက်ထဲမှာ ဖြန်ဖြူးရောင်းချမယ်လို့ တောင်ကိုရီးယား စိုက်ပျိုးရေး ဝန်ကြီးဌာနက ကြေညာပါတယ်။
တောင်ကိုရီးယားရဲ့ အစားအစာ လက်လီလက်ကား ကုမ္ပဏီကြီး ဖြစ်တဲ့ ဂျီယောင်ဘက် ကော်ပိုရေးရှင်းက နိုဝင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့မှာ ပန်းသီး ၇ တန်နဲ့ သစ်တော်သီး ၈ တန်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၂ ရက်နေ့မှာ လိမ္မော်သီးနဲ့ တည်သီး ၁၇ တန်ကို သင်္ဘောနဲ့ တင်ပို့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စတော်ဘယ်ရီ ၅ တန်ကိုတော့ ဒီဇင်ဘာလ အစောပိုင်းမှာ လေကြောင်းလိုင်းကနေ တင်ပို့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုရီးယား ဒေသတွင်း ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ အရှေ့တောင်အာရှမှာ သစ်သီးဝလံ ရောင်းချရေး အထောက်အပံ့ပေးတာ ဖြစ်ပြီး ဈေးကွက် ကျယ်ပြန့်လာဖို့ လမ်းခင်းပေးတာ ဖြစ်တယ်လို့ ကိုရီးယား စိုက်ပျိုးရေး၊ အစားအသောက်နှင့် ကျေးလက်ရေးရာ ဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်ပါတယ်။
တောငျကိုရီးယားက သဈသီးဝလံတှေ မွနျမာ့ဈေးကှကျမှာ ရောငျးခမြယျ
တောငျကိုရီးယားက လတျဆတျတဲ့ သဈသီးဝလံ ၃၇ တနျကို အလားအလာရှိတဲ့ မွနျမာ့ဈေးကှကျထဲမှာ ဖွနျဖွူးရောငျးခမြယျလို့ တောငျကိုရီးယား စိုကျပြိုးရေး ဝနျကွီးဌာနက ကွညောပါတယျ။
တောငျကိုရီးယားရဲ့ အစားအစာ လကျလီလကျကား ကုမ်ပဏီကွီး ဖွဈတဲ့ ဂြီယောငျဘကျ ကျောပိုရေးရှငျးက နိုဝငျဘာ ၁၇ ရကျနမှေ့ာ ပနျးသီး ၇ တနျနဲ့ သဈတျောသီး ၈ တနျ၊ နိုဝငျဘာ ၂၂ ရကျနမှေ့ာ လိမ်မျောသီးနဲ့ တညျသီး ၁၇ တနျကို သင်ျဘောနဲ့ တငျပို့မှာ ဖွဈပါတယျ။ စတျောဘယျရီ ၅ တနျကိုတော့ ဒီဇငျဘာလ အစောပိုငျးမှာ လကွေောငျးလိုငျးကနေ တငျပို့မှာ ဖွဈပါတယျ။
ကိုရီးယား ဒသေတှငျး ကုမ်ပဏီအနနေဲ့ အရှတေ့ောငျအာရှမှာ သဈသီးဝလံ ရောငျးခရြေး အထောကျအပံ့ပေးတာ ဖွဈပွီး ဈေးကှကျ ကယျြပွနျ့လာဖို့ လမျးခငျးပေးတာ ဖွဈတယျလို့ ကိုရီးယား စိုကျပြိုးရေး၊ အစားအသောကျနှငျ့ ကြေးလကျရေးရာ ဝနျကွီးဌာနက ထုတျပွနျပါတယျ။
Previous articleကျူးကျော်ခွင့် ပြုတဲ့ ဝန်ထမ်းတွေ အရေးယူခံရမယ်
Next articleစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကနေ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေကို ဖန်တီးထုတ်လုပ်နေတဲ့ အကြောင်း (ရုပ်/သံ မှတ်တမ်း)